Wasiir Guuled oo iska diiday eedeyn uga timid gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wasiirka Amniga dowladda Federaalka Soomaaliya, C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa iska fogeeyay eedeyn uga timid gudoomiyihii hore ee Gobolka Maxamuud Axmed Nuur “Tarsan”, taasoo ahayd in gaadiid Ambalaas ah oo loo dhiibay wasaaradii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo uu wasiir ka ahaa C/kariim Xuseen Guuled la waayey meel ay ku dambeeyeen.
Wasiirka amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayuu sheegay in weli ay gacanta hay’adaha amaanka ku jiraan gaadiidka ambalaaska ahaa oo uu sheegay in tiradoodu dhan tahay 7 baabuur.
“Waa jirtaa in gaadiid ambalaas ah oo 7 ah naloo dhiibay xilligii xukuumadii hore ee aan anigu wasiirka arrimaha gudaha ka ahaa, waxaan cadeynayaa inaan heyno weli gaadiidka oo ay ku jiraan gacanta hay’adaha amaanka.” ayuu yiri C/kariin.
Wasiir Guuleed, ayaa sheegay in sababta gaadiidkaas dadka loogu adeegi waayey maadaama ay awalba deeq ka timid caalamka ahaayeen ayaa wuxuu sheegay inay ka cabsi qabeen in gaadiidkaasi loo adeegsan karo qaraxyo haddii ay galaan gacanta shacabka ama ay ka baxaan gacanta dawlada.
“Baabuurtaan waa bullet proof oo ah kuwo aanay xabaduhu karin, waxaa dhici karta i haddii qaraxyo la soo saaro in aaskariga iridka jooga uusan celin karin taasna ay dhibaato keeni karto.” ayuu yiri wasiir Guuleed.
Gaadiidkaan oo laga keenay dal Carbeed ayaa markii Muqdisho la keenay muran badan ka dhashay, waxaana markii dambe lagu wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka xilligii xukuumaddi Saacid.
Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Maxamuud Axmed Nuur ayaa markii uu xilka wareejinayey sheegay inuu shaacinayo arrin uu muddo qarinayey oo aheyd in la waayey gaadiidkaas oo lagu ogaa gacanta wasaaraddii arrimaha gudaha iyo aminga Qaranka, wuxuuna farta ku fiiqay in wax laga weydiiyo wasiir Guuleed.